FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SAMOYED - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika samoyed
Toggle ny Samoyed amin'ny 1 1/2 taona
Lisitry ny alika mifangaro samoyed
Ny Samoyed dia manana vatana matevina sy hozatra. Ny loha miendrika wedge dia malalaka sy satroka satro-boninahitra. Ny molotra dia mifanaraka amin'ny haben'ny alika, mihidy eo amin'ny orona. Voafaritra tsara ny fijanonana fa tsy tampoka. Ny lokon'ny orona dia mety mainty, volontany na aty. Mainty ny molotra. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny maso maizina, miendrika amandy dia milentika lalina, somary mivelatra, misy rakotra ambany kokoa sy molony mainty. Ny sofina mijoro sy telozoro dia boribory somary boribory eo amin'ny tendrony. Ny rambony dia lava lava, rakotra volo tsara, entina mihodina ao ambadika. Ny tongotra dia matevina sy hozatra ary ny tongotra dia fisaka ary rakotra volo. Ny palitao matevina sy avo roa heny dia be. Ny palitao dia malefaka, fohy ary matevina miaraka amin'ny volo lava mitombo hatrany amin'ny palitao ivelany. Ny palitao ivelany dia henjana ary mitraka mahitsy fa tsy mikotrana. Ny palitaon'ny lahy dia be mpampiasa kokoa noho ny vehivavy '. Misy ruff manodidina ny hatoka sy ny soroka, fandokoana ny lohany. Ny loko amin'ny palitao dia misy fotsy madio, biskoitra, mavo ary crème. Indraindray fotsy misy tendron'ny volafotsy. Ny fotsy madio dia aleony amin'ny peratra fampisehoana.
Alika malemy fanahy ilay Samoyed. Tena be fandavan-tena, mora mandray olona, ​​sariaka ary be filalaovana, tia ny rehetra izy. Faly izy fa ho sariaka amin'ny olon-drehetra, ao anatin'izany mpiditra an-tsokosoko . Sariaka loatra izy ka tsy tokony hampiasaina amin'ny maha-mpiambina azy, na dia hampitandrina anao amin'ny fisian'ny olon-tsy fantatra aza ny hodi-kazo. Mampifanaraka an-tsitrapo ny fiainam-pianakaviana izany ary mifanerasera tsara amin'ny ankizy. Tena manan-tsaina izy io, ary hamaly ny fampiofanana miorina amin'ny marary, izay tokony hatomboka amin'ny fahazazany. Alao antoka fa ianao dia mafy orina, matoky tena, tsy miovaova ity alika ity mpitarika fonosana hialana amin'ny mety olan'ny fitondran-tena toy ny, fa tsy ferana fotsiny, ny fitrandrahana fatratra. Ny Sammy dia zatra miasa amin'ny ekipa, ary mampiseho toetra miavaka. Rehefa omena ity alika ity izay tokony ho alika milamina, izany hoe ampy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana , miaraka amin'ny fitarihana mazava, manaporofo ny tenany ho miavaka, tsara toetra, velona ary tia fiaraha-monina. Tsy mitady olana velively izany fa mahazaka fahavalo raha ilaina izany. Ireo alika ireo dia manana ny lazany ho chewers. Raha tsy manana mpitarika i Sammy ary / na manao fanatanjahan-tena dia mety ho lasa tena izy manimba raha avela irery mandritra ny ora maro. Ny samoyeds dia afaka miaraka amin'ireo biby tsy an-kaninina rehefa notezaina niaraka tamin'ny alika kely na rehefa nofanina tsara hanao izany, na izany aza dia manana toe-tsaina mitady haza izy ireo ary tokony hitandrina amin'ny biby kely hafa. Afaka mifanaraka amin'ny saka fianakaviana izy ireo. Ity karazana ity dia manana instinct ho an'ny omby.
Haavony: Lehilahy 21 - 23½ santimetatra (53 - 60 cm) Vehivavy 19 - 21 santimetatra (48 - 53 cm)
Milanja: Lehilahy 45 - 65 pounds (20½ - 30 kg) Vehivavy 35 - 50 pounds (16 - 20½ kg)
Ny samoyeds dia mora voan'ny hip hopplasia ary ny sasany mijaly amin'ny diabeta. Mora voan'ny aretin-koditra koa ny hoditra. Mora voan'ny PRA (maso) izy ireo, indrindra amin'ny alika lahy.
Ny Samoyed dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara izany. Tena mihetsika be izy ao anaty trano ary ampy ny tokotany kely. Ny palitaony mavesatra dia mahatonga an'io alika io tsy ho voalamina amin'ny toetrandro mafana be.
Mila fampihetseham-batana mety, anisan'izany ny isan'andro MANDEHANA na jogging. Alao moramora mandritra ny toetr'andro mafana satria ny undercoat volon'ondry dia manakana ny fahaverezan'ny hafanana miorina mandritra ny fanatanjahan-tena.
12-15 taona eo ho eo
Ilaina ny fikolokoloana be. Izy ireo dia mpandatsa-dra mavesatra. Ny palitao roa sosona dia mila miborosy matetika, saingy mirona hijanona fotsy tsy handro. Ny olona voan'ny allergy dia nitatitra fa tsy nanelingelina azy ireo ny palitaon'ny Samoyed.
Samoyeds dia karazan'asa miasa taloha. Nipetraka tany Siberia izy ireo niaraka tamin'ny mpihaza sy mpanarato fantatra amin'ny anarana hoe Samoyeds, noho izany no nahazoana ny anarany ilay karazany. Nampiasa ny alika ny vahoaka Samoyed hisintona ny filanjanany, hiambina ny fananany sy hiompiana renindry. Ny valan-javaboary misy azy io dia mifandray akaiky amin'ilay alika taloha izay tsy misy amboadia na amboahaolo mifangaro ao. Natory niaraka tamin'ny olona ireo alika mba hanafana azy ireo. Robert Scott, mpikaroka tany vaovao, dia nitondra ny alika tany Angletera tamin'ny taona 1889. Tany Angletera no nampivelarana bebe kokoa ny karazany ary avy eo dia niparitaka nanerana ny tontolo hafa. Neken'ny AKC izany tamin'ny 1906.
Avaratra, AKC Miasa
CKC = Club Kennel Kanadiana
NAPR = Fisoratana anarana Amerikanina Purebred Avaratra, Inc.
Holly ilay Samoyed tamin'ny faha-3 taonany nandeha tany amin'ny Lake District any Angletera
Ani kely 3 volana ity zavatra kely mahafinaritra ity.
'Ity dia sarin'ny zazavavy Samoyed roa taona (Miki sy Su) roa taona enina milalao. Samy novonoina izy roa taona lasa izay, saingy mbola velona sy milalao ihany. Tian'izy ireo ny kilalao 'tug' sy kilalao masiaka, nefa koa mampiasa Nylabones be. Samy avela hivoaka isan'andro amin'ny toerana tsy misy bibidia sy biby fiompy izy ireo. Sarotra ny mitsikilo ny zaridainantsika. Sammies dia tena marani-tsaina - afaka manokatra varavarana izy ireo, mampandeha paipa amin'ny fomba lever ary mahatakatra teny maro (maro ny baiko takatra, saingy tsy voatery hankatoavina!). Io palitao io dia raharaha ao amin'ny ririnina, noho ny habetsaky ny fotaka zakany, ary rehefa manondraka, fa ny borosy isan'andro kosa dia mampiadana azy ireo. Tsy hanana karazana hafa, noho ny faharanitan-tsainy, fahalemem-panahiny ary fahendrena, toetra mahafaly. '
Ny sary 'mandraraka' dia ny palitao nesorina tamin'ny alika iray tao anatin'ny fotoana iray! '
'Nanafaka an'i Lexus tamin'ny fiarahamonina Humane teo an-toerana izahay fony izy 8 taona. Tsy nanao izany izy ireo fantaro ny antony nandaozan'ny tompony azy , saingy fifaliana ho anay izy hatramin'ny nahazoanay azy. Samoyed izy izay malala mahafatifaty ary na eo aza ny fahanterany dia tsy afaka ny tsy hitia izahay rehefa nahita azy. Nentinay nody izy ary anisan'ny fianakavianay izy nanomboka teo. Na izany aza, tamin'io andro voalohany io dia fantatray fa tiany ny biby mifono volo! Navelanay izy hijery ny tranonay ary nahita azy nihazakazaka nitondra teddy bera teny am-bavany. Notsipahako ny sarin'ny famotehany ny bera teddy ao ambanin'ny latabatra foosball iray. Rehefa avy nieritreritra izy fa tsy ny zava-drehetra no kilalao sahaza azy. Tiantsika i Lexus ary tsy afaka manantitrantitra ny halehiben'ny famonjena ny biby fiompy. '
Lexus the Samoyed amin'ny faha-8 taonany
lava volo dachshund pomeranian Mix
Hijery ohatra hafa momba ny Samoyed
Sary samoyed 1
Sary samoyed 2
Fa maninona ny oron'ny alikako no nivadika mainty ho mavokely?
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Pumi
Seppala Siberian Sleddog Dog Fampahalalana sy sary
Fampahalalana momba ny fiompiana alika sy alika
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Plott Hound
Alika miteraka: Ny fatotra
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Valley Bulldog
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Jug Dog
tan sy fotsy shih tzu
eskimo amerikana sy mix pomeranian
alika pitbull mainty sy fotsy
jack russell shih tzu afangaro amidy
mifangaro pitbull amin'ny bulldog amerikana
ohatrinona ny lehibe terriers omby